Samsung hadda dhibaatooyin culus ayey ku qabaan mashiinnada dharka lagu dhaqo | Androidsis
Haddii sheyga u gubtay Samsung iyo dhibaatooyinka Samsung Galaxy Note 7, dhibaatadan halista ah waxay la timid mid kale oo aan haba yaraatee lahayn qashin, iyo hadda Samsung waxay dhibaato weyn ku qabeysaa mashiinada dharka lagu dhaqdo. Dhibaatooyinka sida daran ama ka badan kuwa Samsung Galaxy Note 7, aad ayey u badan yihiin guddiga badbaadada ee alaabada macaamiisha ee Mareykanka, (CPSC), waxay u gudbisay dalab rasmi ah maamulka shirkada.
Dhibaatada ayaa la socota gariirka xad-dhaafka ah ee moodooyinka qaarkood ee mashiinnada dharka lagu dhaqo ee ay soo saartay shirkadda Samsung, taas oo marka loo eego cabashooyinka macaamiil badan, gilgishaan wax badan oo ay u noqon karaan khatar dhab ah xagga jir ahaanshaha dadka.
Mushkiladda laga hadlayo waxaa bixinaya moodooyinka qaar ka mid ah mashiinnada dharka lagu dhajiyo ee dusha sare laga soo saaro oo ay samaysay shirkadda Samsung inta udhaxeysa Oktoobar 2011 ilaa Abriilkii ugu dambeeyay ee sanadkan 2016. Moodooyinka qaar ee mashiinnada dharka dhaqa, oo sida ku cad cabashooyinka laga helay macaamiil badan, waxay u ruxin lahaayeen si xad dhaaf ah iyo qaab la yaab leh oo ay qatar dhab ah ugu noqon karaan dadka taasoo xitaa u horseedi karta waxyeelo iyo dhaawac.
Dhibaatada mashiinada dharka lagu dhaqo ee Samsung waa mid aad u daran oo halis ah oo xitaa waxay leeyihiin qatar qarax
Waan ognahay inuu jiro baaritaan socda oo iyaguna ay baarayaan qaraxyo yaryar oo ay ku dhici lahaayeen qaar ka mid ah moodooyinka mashiinnada dharka lagu dhaqo ee Samsung ay saameeyeen gariir fara badan inta lagu gudajiray howsha dhaqida.
Dhibaatadan ay Samsung ku haysato mashiinadeeda dharka waa mid aad u daran oo shirkadu xitaa kula talisay macaamiisha ay saameysay ama macaamiisha mustaqbalka ee laga yaabo inay leeyihiin mid ka mid ah mashiinadan dharka waalan, in Ku dhaq maydhashadaada barnaamijyo hoose kacaans y iska ilaali dhaqida xawaare buuxa ama awood ilaa inta suurtogalka ah si looga fogaado shilalka suurtagalka ah ama xitaa qaraxyada suuragalka ah.
Waa in la sheegaa sida laga soo xigtay shabakadda Mareykanka ee ABC, in kasta oo dhowr dhacdo oo dhowr ah oo qaraxyo yaryar ah ay ka dheceen mashiinnada dharka lagu dhaqo oo ay saameysay dhibaatada "Vibes xun", Waxaa la dhihi karaa waa cadaalad, taasi Qaraxyadan ayaa ahaa kuwo aad u culus oo aan wax dhaawac ah ama waxyeello ah u geysan dadka ay waxyeellada soo gaartay.
Waqtigan xaadirka ah iyo kharashka lagu bixinayo iftiin dheeraad ah dhibaatooyinkaan qaar ka mid ah mashiinnada dharka lagu dhaqo ee Samsung, waa in la yiraahdaa taas Dhibaatooyinkan la sheegay waxaa lagu ogaadey ama laga soo sheegey dhulka Waqooyiga Ameerika oo keliya, in ugu yaraan hadda.
Markaa haddii ka mid ah taariikhaha kor lagu falanqeeyay, taariikho u dhexeeya Oktoobar 2011 ilaa Abriil 2016 waxaad soo iibsatay Samsung mashiinka dharka lagu shubto ee ugu sarreeya, mabda 'ahaan waa inaadan haysan nooc dhibaato ahIn kasta oo aysan dhaawaceynin in la hubiyo in gariirkeeda inta lagu jiro wareegga dhaqidda ay caadi tahay, iyo haddii aad aragto in mashiinka dharka lagu dhaqo uu u gariirayo si la yaab leh oo xad dhaaf ah, toos ula xiriir adeegga macaamiisha Samsung.
Intaa waxaa dheer, ma dhaawaceyso, haddii laga shakiyo inaan haysanno mid ka mid ah mashiinnada dharka lagu dhaqo ee ay saameeyeen dhibaatooyinka gariirka xad-dhaafka ah, in la raaco talooyinka Samsung lafteeda iyo iska ilaali inaad ku dhaqdo xawaare buuxa adoo isticmaalaya barnaamijyo dhaqsi-xawaare hoose ku socda.
Sikastaba, hal dhibaato oo dheeri ah oo kuso biirta liiska balaaran ee Samsung, waa liistada shitanka horyaalnimada ee bilaabmay dhawr sano kahor geerida lama filaanka ah ee Galaxy S3, Waa shumis taariikhi ah oo dhib ku noqday Samsung inkasta oo ay tahay fadeexad caalami ah oo run ah.
Shaki la’aan, sanadkan 2016 waa sanad la iloobo Samsung, kahor iyo kadib taasi waxay saameyn kuyeelankartaa wadamada kaladuwan ee Kuuriya ilaa iyo hada loo isticmaalay ka bixida dhibaatada, dhibaatada dhibaatada kadib.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Samsung ayaa soo saarta cows, hadda waxay dhibaato weyn ku haysaa mashiinnada dharka lagu dhaqdo
ha isticmaalin Calgon ..?
Prisma waxay ku dareysaa taageerada fiidiyowga, oo hadda kaliya ku jirta iOS
Raadi haddii taleefankaaga casriga ah ee Xiaomi uu cusbooneysiin doono MIUI 9